Kaalmada lamaanaha -
Waa muhiim dhowrista ladnaanshaha iyo samaanta lamaanaha nolol maalmeedka qoyska carruureyda. Waxaa suurogal ah mashquulka nolosha in waalidku isu waayaan wakhti ku filan.
Suurogal iney lamaanayaashu kala duwan yihiin, taasoo keenta kala fikir duwanaasho, sababta iskudhac noqda joogto. Isku dhacuna waa qeyb kamida nolosha qoyska. Mararka qaar waxaadhacda iney dhibaatooyinkii is biirsadaan.
Haddii ismaandhaafka xal u waayaan dhexdooda, waxaa wanaagsan wakhti hore iney kaalmo raadsadaan. Talo iyo baxnaaneeyaasha lamaanaha ayaa kala furfuraya waxyaabaca isku cakiran. Ka ogow degmadaadu Rugta waanwaanta qoysaska ama baxnaaninta qoyska. Ka aqriso dheeri rugta dhalaanka iyo hooyooyinka beejka Adeega arrimaha bulshada ee reeraha ilmoyleyda ah.
Waxaa jira degmada mooyee hay’ado badan oo iyagauna caawiya qoysaska, sida Xarunta waanwaanta qoysaska ee kaniisada.
Weydii caawiyaasha nooca adeeg ama caawimo ay degmadaadu u qabato qoysaska talosiinta ama adeega arrimaha bulshada. Sidoo kale rugta dhalaanka iyo hooyooyinka, xanaanooyinka ama shaqaalaha iskuulka ayaa horey idiin hagi kara.